Monday March 11, 2019 - 10:16:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horraysay muddo bilo ah kadib waxaa wadanka Al Jazaa'ir dib ugu laabtay Cabdi Caziiz Botafaliiqa oo ah madaxweynaha wadankaasi.
Isagoo saaran diyaarad gaar ah ayuu Botafaliiqa shalay gelinkii dambe ka degay garoon ay gacanta ku hayaan ciidamada Melleteriga oo kuyaal duleedka magaalada Caasimadda ah ee Al Jazaa'ir.
Botafaliiqa ayaa lagasoo qaaday isbitaal kuyaal magaalada Jineefa ee caasimadda wadanka Swezerland halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayay, dib usoo laabashada madaxweynaha Al Jazaa'ir wuxuu imaanayaa xilli wadanka ay ka jiraan kacdoonno shacabi oo isaga iyo maamulkiisa ka dhan ah.
Dad ku dhow hal milyan oo qof ayaa jimcihii lasoo dhaafay isugusoo baxay magaalooyinka waaweyn ee wadanka waxayna aad ugasoo horjeedaan in markii shanaad uu doorashooyinka madaxtinimada ka qeyb galo Botafaliiqa oo muddo 20 sanadood ah soo maamulayay wadanka Al Jazaa'ir ee dhaca waqooyiga qaarada Afrika.
Lama oga sida ay noqon doonto xaaladda wadankaasi waxaase loo badinayaa in Botafaliiqa uu ku adkeysan doono ka qeybgalka doorashooyinka isagoo ciidamada Melleeteriga u adeegsanaya daminta kacdoonka shacabi ee Al Jazaa'ir ka socda.
Wasaaradda Tacliimta sare ee Al Jazaa'ir ayaa ku dhawaaqday in albaabada loo laabay jaamacadaha waaweyn ee wadanka islamarkaana lafasaxay ardayda sababa la xiriira kacdoonnada rabshadaha wata oo saameyn ku yeeshay waxbarashada wadanka.